Nageessaa Oddoo Duubee:- ITOOPHIYAA (Ethiopia) fi Qarooma Uummata Kuush
Nageessaa Oddoo Duubee irraa
Biyya Itoophiyaa jedhantee waamamtu tana keessatti cunqursaa fi miidhaan cimaan Sabootaa fi sab-lammoota hedduurra gayee jira. Daafee hacuuccaa fi cunqursaa kanaan baay’een keenya maqichalle ni jibbina. Worri gariin ammoo maqaan ETHIOPIA jedhu kun durii kaasee macaaf /kitaaba qulqulluu keessa jira, kanaafuu biyyi ETHIOPIA jedhantu tun
durii kaachee bifuma amma jirtu kanaan, boca amma qabdu qabattee woggoota kuma sadii ol jiraattee jirti jedhanii amanan.Iteetuu malee jechi kun hiikni isaa ka durii maal akka ta’e nami beeku nama rukkicha. Jechi Itoophiyaa jedhu dhaloonni isaa jecha afaan Giriikii ti:
baay’ee gaarii dha. caalaatti bal’isaa barreessaa.